Iphayi le-Peanut Butter - Ungadliwa
okuphekiwe ama-rutabaga zokupheka noshukela onsundu
ungapheka kanjani u-beetroot ku-microwave
okugcwele utamatisi iresiphi ngomhlabathi wenkomo
Iphayi le-Peanut Butter
Iphayi le-Peanut Butter kuyindlela enhle yokupholisa, ehlobo noma nganoma yisiphi isikhathi sonyaka!
Isigaxa sekhekhe lamantongomane esimnandi esenziwe ngamabili sihlangana kahle ngongqimba lwe-peanut butter ganache no-peanut butter ophakathi nendawo.
Uma unabathandi be-PB endlini yakho, le iresiphi eyodwa ozoyenza kaninginingi!
Njengoba isimo sezulu esifudumele sisondela ngokushesha, sengiqala inqubo yami yonyaka yasentwasahlobo yokwenza zonke izindlela zami zokupheka ukhilimu.
Ngenkathi uphaya wezithelo oshisayo, ulungele ukuhlwa okukhanyayo, obandayo, o-creamy awekho ophaya wokubhaka bangabangane abalungele lezo zinsuku ezinde, ezishisayo zasehlobo. Futhi le iresiphi ye Iphayi le-Peanut Butter yi 'ukhilimu' wesitshalo uma kukhulunywa ngamaphayi akhilimu.
Ungayenza Kanjani I-Peanut Butter Pie
Kuningi ongakuthanda ngale recipe ukuthi angazi ukuthi ngizoqala ngaphi.
Uqweqwe lwe-peanut butter cookie, mhlawumbe? Lesi sigaxa simnandi kakhulu - kufana nento ongakaze uyizwe ku iphayi yamantongomane iresiphi .
Iningi Amaphayi e-peanut butter sebenzisa uqweqwe lwe-graham noma uqweqwe lukashokholethi, kepha lokhu kuqweqwe lukakhukhunathi okwenziwe ngokwazo kuhlukile futhi kumnandi ngokuphelele. Uzoyithanda into eyengezayo kuma-insides anokhilimu!
Uma ungathanda, ungakwenza lokhu noqweqwe lwe-Oreo futhi, mane ubeke amakhukhi we-Nutter Butter ngamakhukhi e-chocolate Oreo.
Ekhuluma ngokukhilimu ngaphakathi, le pie akuyona nje ushizi ojwayelekile kakhilimu nebhotela lamantongomane. Cha, isebenzisa isendlalelo sikakhilimu wamantongomane akhilimu phakathi kokhilimu ngaphakathi kanye noqweqwe ukukhulisa kakhulu lelo phunga lebhotela lamantongomane.
Kulula ukwenza, futhi kuletha ubuningi bobuntu obumnandi ekulungeni ngakunye.
Ushizi we-Cream ekugcwaliseni okulula kokubhaka awungezi nje kuphela ukunotha kwaleli phayi, kepha lenza ukuthi i-PB ibe ukuvumelana okuhle kophudingi.
Lokhu kugcwaliswa kwamantongomane kuphelele kukaphayi njengoba uthela kalula kuqweqwe lwakho futhi ungasetshenziswa ngommese noma nge-spatula.
Uzofuna ukuqiniseka ukuthi lokhu kubanda kahle (ubuncane bamahora angu-4-6). Lokhu kuvumela uphaya ukuthi lusethwe kahle futhi lwenze lubambe ukwakheka kwalo (akekho umuntu ofuna iphayi yamantongomane egijima).
Le pie yenziwe nge-topping topping kodwa uma ungathanda ukwenza le pie yamantongomane ngaphandle kwe-Cool Whip, ungasebenzisa ukhilimu omusha oshaywayo endaweni.
Amantongomane aqoshiwe enza ukukhishwa okuhle kwalokhu Iphayi le-Peanut Butter , kodwa futhi ungazama ushokoledi chips, isikhunta sokwenza kwami ​​okuzithandayo isosi ye-fudge eshisayo , noma usike amaswidi kaReese.
Le pie elula izoba intandokazi kubo bonke abathandi bebhotela lamantongomane ekhaya lakho!
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokupheka8 imizuzu Isiqandisi4 amahora Isikhathi Esiphelele4 amahora 18 imizuzu Izinkonzo12 izinsizakalo UmbhaliUKathleen SLe Peanut Butter Pie enhle iyindlela enhle yokupholisa, ehlobo noma nganoma yisiphi isikhathi sonyaka! Isigaxa sekhekhe lamantongomane esimnandi esenziwe ngamabili sihlangana kahle ngongqimba lwe-peanut butter ganache kanye ne-peanut butter middle maphakathi. Phrinta Phina
▢½ inkomishi amakinati athosiwe
▢24 amakhukhi we-nutter butter
▢⅓ inkomishi ibhotela kuncibilikile
Amabhinqa Amantongomane Ganache
▢1 inkomishi ama-chips wamantongomane
▢¼ inkomishi ukhilimu osindayo
▢1 inkomishi ubisi oluphelele obandayo
▢1 iphakethe ukuhlanganiswa kwe-vanilla pudding okusheshayo Ama-ounces angu-3.4
▢1 inkomishi ibhotela lamantongomane akhilimu
▢4 ama-ounces ukhilimu ushizi ithambile
▢½ inkomishi ubisi oluncibilikile
▢8 ama-ounces isiswebhu esipholile ukuncibilika
▢¾ inkomishi amakinati athosiwe oqoshiwe
Esikhathini noma esitsheni sokudla, engeza amakinati bese ushaya kuze kube yilapho usuqoshwe. Faka amakhukhi bese ushaya uze uchotshozwe. Faka ibhotela elicibilikile bese ushaya izikhathi ezimbalwa ukuxuba.
Cindezela ingxube ezansi nasezinhlangothini zepuleti likaphayi elingu-9-intshi elingafakwanga. Bhaka kuhhavini osushisayo ngaphambi kwemizuzu engu-6-8. Isikhumba esipholile ngokuphelele.
Faka amachipisi ebhotela lamantongomane nokhilimu osindayo esitsheni esincane esiphephile se-microwave, ngomzuzu owodwa ngamandla angu-50%, susa kwi-microwave, unyakaze uze ubushelelezi. Thela uqweqwe lukaphayi opholile. Beka esiqandisini ngenkathi wenza i-Peanut Butter Cream.
Yenza i-Peanut Butter Cream:
Esikhathini sokuxuba esiphakathi, hlanganisa ipudding nobisi, nomxube kagesi ngejubane eliphakathi, imizuzu emibili ebekelwe eceleni.
Kwesinye isitsha, hlanganisa ibhotela lamantongomane, ushizi kakhilimu, nobisi olujiyile kuze kube bushelelezi. Hlanganisa ingxube ye-pudding ize ifakwe ngokulinganayo. Bamba ngobumnene ama-ounces ayisishiyagalombili we-Cool whip uthele ku-crust. Spread ama-ounces ayisishiyagalombili we-Cool Whip ngokuhlobisa ngaphezulu. Amafriji ama-4-6 amahora.
Uma usukulungele ukukhonza, fafaza ngaphandle kwamasentimitha angu-2-3 amayintshi ngamantongomane aqoshiwe bese ukhonza.
Ukukhonza:1ucezu,Amakholori:495,Amakhabhohayidrethi:32g,Amaprotheni:16g,Amafutha:36g,Amafutha agcwalisiwe:ishumi nanhlanug,Cholesterol:Isinemg,I-Sodium:322mg,Potassium:389mg,Umucu:3g,Ushukela:22g,Uvithamini A:490IU,Uvithamini C:0.3mg,I-calcium:138mg,Insimbi:1.1mg
Igama elingukhiyeI-peanut butter pie elula, indlela yokwenza uphayi we-peanut butter, i-Peanut Butter Pie InkamboUgwadule KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
I-Banana Cream Pie
I-Peanut Butter Lasagna (Ividiyo)